Qatar Airways voalohany nanatevin-daharana ny sehatra IATA CO2NNECT
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Qatar Airways voalohany nanatevin-daharana ny sehatra IATA CO2NNECT
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fampiasam-bola • Vaovao • People • Vaovao farany momba ny Qatar • tompon'andraikitra • News sustainability • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Qatar Airways voalohany nanatevin-daharana ny sehatra IATA CO2NNECT.
Lalana efatra (4) no natomboka ny tetikasa pilote, izay mikasa ny hanitatra ny tambazotran'ny entany amin'ny toeran'ny mpitatitra entana enimpolo (60) mahery ary toeran'ny mpandeha efapolo (140) maherin'ny zato eran-tany.
Ny fandaharana dia mametraka dingana lehibe eran-tany mankany amin'ny decarbonization ny entana an'habakabaka.
Qatar Airways Cargo dia te-hitari-dalana amin'ny fanatanterahana ny andrasan'ny mpanjifa amin'ny fenitra ambony indrindra momba ny faharetan'ny tontolo iainana.
Ny mpanamory dia mampiasa fomba fanao tsara indrindra amin'ny indostrian'ny IATA amin'ny kajy ny famoahana CO2 isaky ny kilao entana.
Miara-miasa amin'ny Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA), Qatar Airways Cargo, fizarana entana an'ny Vondrona Qatar Airways, dia ho mpitatitra entana voalohany hiditra ao amin'ny Iată CO2NNECT sehatra ary manolotra vahaolana ara-tontolo iainana namboarina ho an'ny mpanjifany. Kuehne+Nagel, iray amin'ireo mpitatitra entana lehibe indrindra eran-tany, no ho mpanjifa fanombohana ny sehatra, mifanaraka amin'ny fanoloran-tenany amin'ny faharetana. Mba hanamarihana izany fiaraha-miasa izany, tamin'ny 01 Novambra 2021, ny Qatar Airways Cargo dia nanao ny fandefasana entana an'habakabaka tsy misy karbônina voalohany avy any Doha mankany Frankfurt, Zaragoza, Liège ary Paris.
Ity toko vaovao amin'ny programa fanonerana karbaona an-tsitrapo ity, naorina teo ambanin'ny elo IATA, dia mametraka dingana lehibe amin'ny indostria mba hanafainganana ny decarbonization ny fiaramanidina ary mamela ny fandefasana entana amin'ny rivotra ho tsy miandany amin'ny karbônina amin'ny alàlan'ny fanomezana kajy karbônina mitambatra sy vahaolana offset eo anelanelan'ny Qatar Airways, mpandefa entana, ary mpitatitra entana toy ny Kuehne+Nagel. Hanome toky ho an'ny mpanjifany izy io fa ny crédit novidina mba hanonerana ireo entona ireo dia avy amin'ny tetikasa manolotra fampihenana karbônina voamarina tsy miankina, ary koa tombontsoa ara-tontolo iainana sy sosialy.
Lalana efatra (4) no natomboka ny tetikasa pilote, izay mikasa ny hanitatra ny tambazotran'ny entany amin'ny toeran'ny mpitatitra entana enimpolo (60) mahery ary toeran'ny mpandeha efapolo (140) maherin'ny zato eran-tany. Ny mpanamory dia mampiasa a Iată fanao tsara indrindra amin'ny indostria amin'ny kajy ny entona CO2 isaky ny kilao entana. Miaraka amin'ity programa ity, ny mpanjifa entana dia afaka manonitra mora foana ny etona mifandray amin'ny fandefasana entana an'habakabaka, ho dingana iray amin'ny fanatanterahana ny fanoloran-tenany momba ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny offset azo antoka sy avo lenta ary ICAO CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) ihany no azo ampiasaina.
Vondrona Qatar Airways Ny Lehiben'ny Mpanatanteraka, Andriamatoa Akbar Al Baker, dia nilaza hoe: “Rehefa nanomboka ny fandaharan'asa fanonerana karbona ho an'ny mpandeha ny Qatar Airways tamin'ny taona 2020, dia faly izahay manolotra azy ireo ny safidy hitaterana ny entam-piaramanidina amin'ny CO.2 fomba tsy miandany amin'ny ho avy. Ny Qatar Airways Cargo dia lohalaharana hatrany amin'ny hetsika indostrialy. Faly aho amin'ny ezaka ataontsika hanohanana ny indostrian'ny fiaramanidina amin'ny fanatrarana ny tanjona fampihenana ny entona karbônina.
Willie Walsh, IatăNy Tale Jeneralin'ny Tale Jeneralin'ny Firenena Mikambana dia nilaza hoe: "Ny tanjon'ny indostria hahatratrarana ny entona karbônina aotra amin'ny 2050 dia mihatra amin'ny mpandeha sy ny entana. Ilaina ihany koa ny mpiara-miombon'antoka rehetra amin'ny indostria mba hiara-hiasa sy handray vahaolana vaovao. Arahabaina ny Qatar Airways Cargo noho izy voalohany nampihatra CO2NNECT, ary ho an'i Kuehne+Nagel noho ny maha mpanjifa fanombohana azy. Rehefa mivory ho amin'ny fivoriana COP26 izao tontolo izao mba hanamafisana ny drafitra fampihenana karbônina eran-tany, ny fandefasana an'ity vahaolana fanonerana ity dia mampiseho ny fanoloran-tenantsika manerana ny indostria amin'ny entana an-habakabaka maharitra. "
felix lian hoy:
November 15, 2021 amin'ny 08: 26
Manome serivisy fandefasana entana avy any Chine mankany Mexico/Colombia/Chile izahay.